November 28, 2020 – Kichuu
Ethiopia says it has taken full control of Tigray capital Mekelle Ethiopia’s Prime Minister Abiy Ahmed announced on Saturday that the army had entered the capital of Tigray in an offensive against the region’s dissident [Read More]
“Naannoo keenya bulchuuf mirga qabnu kabachiisuuf du’uuf qophiidha” Aanga’oonni TPLF gameeyyii qabsoo waggoota 17 TPLF fi isa boodas mootummaa Itoophiyaa keessatti aangoo murteessoo akka waraanaafi tika qabatanii warra turaniidha. Abiy si’a lammataf aanga’ootniifi waraanni TPLF [Read More]
Oduu Ammee! Raayyaan Ittisa Biyyaa magaala Maqalee to’adhe jedhe.
Oduu Ammee! Raayyaan Ittisa Biyyaa magaala Maqalee to’adhe jedhe. Itaamaajiiriin Raayyaa ittisa Biyyaa Janaraal Birhaanuu Juulaa raayyaan ittisaa magaala Maqalee guuyummaan guutuutti to’achuu ibsaniiru. MM Abiy Ahimad duula kanaan “namootni nagaan qiyyaafannoo keessa otoo hin [Read More]
Poolisiin Federaalaa rogeeyyii miidiyaa dabalatee aanga’oota waraanaa 27 irratti ajaja hidhaa baase. EBC’n Polisii federaalaa waabeffatee akka gabaasetti namootni torba rogeeyyii ”miidiyaatti fayyadamuun ergaa biyya diigu kanneen raabsaniidha” jedhameera. Namootni Kunniinis: * Dr. Iziqeel [Read More]
#Breaking-Muddama hamaa #Abiyyi_Ahmed! Yeroo ammaa waan sadi gurguddootu Abiyyi Ahimed hudhee harkaa qaba. -1ffaa Waraana Tigraay irratti baneen Tigraay huutee qabuufi addunyaan gama Dipiloomaasiin muka itti micciirtee Abiyyi wareersaa jirti. -2ffaa Gama suudaani fi [Read More]
#BRAEKING NEWS Iccitii masaraa mootummaa fi tika mootummaa koloneeffata Impaayera xoophiyaa keessaa baate Lolli Kaaba biyyattiitti akkuma jalqabeen qaamota sadiif dirqamni olaanaan kenname. 1. Waraana Raayyaa ittisa biyyaa 2. Tika Biyyoolessaa 3. Miidiyaalee dha. [Read More]
Tigray crisis: Ethiopian soldiers accused of blocking border with Sudan By Anne Soy The number of refugees fleeing the northern Tigray region of Ethiopia – where federal and regional forces are engaged in fighting – [Read More]
#BRAEKING NEWS B/jeneraal Tafarraa Maammoo ajajaa Humna Addaa Naannoo Amaara tahee muudameera. Tafarraa Maammoo kanaan dura miseensa Ginboot 7 tahee yaalii fonqolcha mootummaan shakkamee waggaa muraasa hidhamee bahe. Waxabajjii bara 2011 immoo ajjeechaa qondaalota [Read More]
Mootummaan kun Mootummaa Oromooti jedha jaarsi duuti isa balfe Leencoo Lataa jedhaniin kun!
Mootummaan kun Mootummaa Oromooti jedha jaarsi duuti isa balfe Leencoo Lataa jedhaniin kun! Oromoon kan barabaraan gabrummaa keessati hafte midhaan ishee Adunyaa biratti dhagahamuu dhabe inni guddan sababa gantuu fii abbaa garaa baay’atuuf NEW Oromo [Read More]